Honda Fit Shuttle 2012 (#678794) ကို Kyauktada မြို့နယ်တွ... | CarsDB
Lot Number: #678794
Honda Fit Shuttle ...2012
Smart selection Grade
Smart key (စမက်ကီး)
ပစောက် Tv (Honda Or Tv)HDD Hark Disc Tv
စတီယာရင် volume နှစ်ဘက်
Video input/output နှင့် usb ပေါက် ပါသည့်
BGO လိုင်စင် ကားရှယ်...
လိုင်စင် သက်တမ်း အသစ် ၂နှစ် တိုးထား...
30-12 -2020 မှ သက်တမ်း ကုန်မည်
နံပါတ် မြင့် မော်ဒယ် မြင့် Function အစုံ ဂရိတ် အပြည့်
Original Shuttle Alloy...
အဲယားကွန်း ဒစ်ဂျစ်တယ်. ..
ကီလို ထိန်းညှိ မောင်းနှင်းနိုင်တဲ့ cruise control...
ဆီစားသက်သာတယ် eco mode...
လမ်းမချော်တဲ့ vsa စနစ်...
လက်တင်ကြီး. လည်သာ seat...
ဘက်မှန်မီးချောက်. မှန်မည်း.မှန်ချိန်. မီးချိန်.နောက်ဒုတ်
ကားကောင်းဖို့ နှင့် ဈေး မများဖို့ တာဝန်ယူသည့်
အတိုက်ခိုက် မရှိ.ထိုင်ခုံ အပေါက်ပြဲမရှိ.မှန် စပေါ့ မရှိ-အော်ဆေး ပတ်လည်-အင်ဂျင်ခန်း သံချေးမရှိ.အဲယားကွန်း အေးဆိမ့် ...တာယာလေးလုံး အားကောင်း
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Right Choise မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Honda Fit Shuttle 2012 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။